Home » Hawaii Travel News » HTA: trano fandraisam-bahiny indroa miorim-pirinty Hawaii amin'ny taha onenana
Any amin'ny Nosy Hawaii, dia nitatitra ny tahan'ny mponina 90.1 isan-jato eo ho eo amin'ny fanjakana amin'ny telovolana fahatelo amin'ny taona 2018, izay nitovy tamin'ny telovolana fahatelo 2017, araka ny tatitra nataon'ny Hawaii Timeshare Quarterly Report: Jolay-septambra 2018, navoakan'ny ny Hawaii Tourism Authority (HTA).
Raha ampitahaina, ny fananan'ny trano fandraisam-bahiny manerana ny fanjakana dia nanisa 79.7 isan-jato nandritra ny telovolana fahatelo, araka ny angon-drakitra STR, Inc. izay notaterina tamin'ny HTA.
Ny fananana fizarana fizarana any Oahu dia nitarika ny fanjakan'ny nosy efatra tao Hawaii nandritra ny telovolana fahatelo, mitentina 94.3 isan-jato (isa 1.8 isan-jato) raha oharina amin'ny vanim-potoana iray lasa izay. Ny fananana Timeshare ao amin'ny County of Maui dia eo ho eo ny salan'isa 91.8 isan-jato (+1.0 isanjato isan-jato). Ny fipetrahan'ny Timeshare dia nihena tany Kauai (-2.9 isan-jaton'ny isa hatramin'ny 86.5%) sy ny nosy Hawaii (-0.9 isan-jaton'ny isan-jato hatramin'ny 83.7%).
Any amin'ny faritra rehetra dia vitsy ny mpitsidika mizara ny fotoana amin'ny telovolana fahatelo isan-taona. Araka ny tatitra, mpitsidika 222,980 no nijanona tao amin'ny toeram-pivarotana fizarana fotoana iray na tamin'ny ampahany tamin'ny fotoanany tao amin'ny Nosy Hawaii tamin'ny telovolana fahatelo, fihenan'ny 5.5 isan-jato raha oharina tamin'ny taona lasa. Amin'ity totalina ity dia 171,310 no nijanona irery tao amin'ny toeram-pivarotana fizarana fotoana iray rehefa nitsidika an'i Hawaii.
Ny mpitsidika Timeshare dia nisolo tena ny 8.9 isan-jaton'ny fahatongavan'ireo mpitsidika tao Hawaii tamin'ny telovolana fahatelo 2018. Ankoatr'izay, ny mpitsidika an'i Hawaii dia manana faharetana maharitra 9.7 andro mandritra ny telovolana fahatelo, izay avo kokoa noho ny salan'isan'ny faharetan'ny 8.8 andro ho an'ny mpitsidika rehetra.
Ny tompon'ny Timeshare mijanona ao amin'ny tarika misy azy dia mitentina 55.8 isanjaton'ny efitrano fandraisam-bahiny amin'ny trano fananana manerana ny fanjakana mandritra ny telovolana fahatelo. Ireo mpivarotra (tompona ora dia mitoetra ao anaty singa iray tsy ananan'izy ireo amin'ny alàlan'ny programa fifanakalozana fotoana) dia nisolo tena ny 19.7 isan-jaton'ny efitrano nipetrahana. Ny fanofan-trano zara raha misy fizarana fizarana ho an'ny tompona sy ny mpanakalo mihoatra ny toerana onenany, ary koa ho an'ny besinimaro, dia naneho ny 16.7 isan-jaton'ny efitrano fandraisam-bahiny tamin'ny trano fananana. Ny fampiasana marketing dia naneho ny 7.7 isan-jaton'ny efitrano fandraisam-bahiny tamin'ny telovolana fahatelo.
HTA's Hawaii Timeshare Quarterly Report dia nomanin'i Kloninger & Sims Consulting LLC. Ny valim-panadihadiana fizarana telovolana telovolana faha-telo volana 2018, miorina amin'ny angona nomen'ny fananana 53 isaky ny fizaram-potoana, dia maneho 82.1 isan-jaton'ny 11,766 ora fizarana Hawaii.
Fitsipika vaovao any Jamaika hanamafisana ny fiantsenana toeram-pivarotana amin'ny taona ho avy